‘ အရှုပ်အထုပ် တခု ရှင်းသွားတယ် ‘ – ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ ဟာ ချဲလ်ဆီးကလွဲပြီး ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် အတွက် ဘာကောင်းကျိုးတခုမှ မပေးခဲ့ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဆိုင်မွန် ဂျော်ဒန - xyznews.co
‘ အရှုပ်အထုပ် တခု ရှင်းသွားတယ် ‘ – ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ ဟာ ချဲလ်ဆီးကလွဲပြီး ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် အတွက် ဘာကောင်းကျိုးတခုမှ မပေးခဲ့ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဆိုင်မွန် ဂျော်ဒန
ရုရှား ရေနံ သန်းကြွယ် သူဋ္ဌေး ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကပဲ သူ အနှစ် ၂၀ နီးပါး ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ရောင်းချတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကလပ် တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် statement ထုတ်ကာ ၊ ကြေငြာခဲ့ပါတယ် ။
လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေဆဲ ရုရှား – ယူကရိန်း စစ်ပွဲရဲ့ ပယောဂကြောင့် အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ ဟာ အင်္ဂလိပ် ပါလီမန်ရဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိအားမှုကို ခံနေရသလို ၊ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်း မထိခိုက်စေချင်တဲ့ အတွက် ၄င်းဟာ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ချလိုက်ရဟန် တူပါတယ် ။
အသင်း ရောင်းချမယ့် ဖြစ်စဉ်ဟာ အတိုင်းအတာ တရပ် အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပေမယ့် ၊ လာမယ့် ရာသီမှာတော့ ချဲလ်ဆီး ဟာ ပိုင်ရှင် အသစ်နဲ့ တဖန် ထပ်မံ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တဖက်မှာ အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျကို နိုင်ငံရေး ၊ စစ်ပွဲ အကြောင်းတွေနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် တလွှား ဝေဖန်မှုတွေလည်း တနေ့တခြား မြင့်တက်လာပါတယ် ။
ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ် နည်းပြဟောင်း တဦး ဖြစ်တဲ့ ဆိုင်မွန် ဂျော်ဒန် က အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ ဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်း အပေါ်ကလွဲပြီး ၊ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘောလုံး လောက အပေါ် ဘာတခုမှ အကျိုးမပြုကြောင့် ၊ ၄င်းတို့ အတွက် အရှုပ်အထုပ် တခု သက်သာသွားတယ်လို့ ဖွင့်ဟလာပါတယ် ။
ဆိုင်မွန် ဂျော်ဒန် က ” လေးစားမှုထားပြီး ပြောရရင် ၊ အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ ဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်း အတွက်က လွဲပြီး ၊ အင်္ဂလိပ် ဘောလုံးလောကမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဆိုးရွားဆုံး အရာတွေထဲက တခုပါ ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရင်ကတည်းက ခရီးရဲ့ အထက် လမ်းကြောင်းကို ရောက်ရှိနှင့်ပြီးပါပြီ ။ ”
” ပရီးမီးယားလိဂ် ဟာ အမြင့် ပျံသန်းနေပြီးသား ဖြစ်သလို ၊ ရုပ်သံ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ခတွေကနေလည်း ဝင်ငွေတွေ အများကြီး ရရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် ။ ချဲလ်ဆီးမှာ သူ လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာက ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုသာ ဖြစ်သလို ၊ သူဟာ ဘောလုံးလောကကို ငွေကြေးနဲ့ ဝယ်ယူလို့ ရတယ် ဆိုတဲ့ လုပ်ထုံးနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ တန်ဖိုး တိုင်းတာမှုကို ပြောင်းလဲ ပစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ”
” ဒီတော့ ဘဏ္ဍာရေး အရ ငွေကြေး မတတ်နိုင်တာ မင်းထိုက်နဲ့ မင်းကံဆိုတဲ့ သဘော သက်ရောက်သွားစေပါတယ် ။ အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကြောင့် ဘာပြန်ရလိုက်လဲ ? ပေးဆပ်လိုစိတ် မရှိတဲ့ ၊ အချိန်တန်ရင် လစာပဲ မျှော်တတ်တဲ့ ကစားသမား မျိုးဆက် တခုသာ အစားထိုး ပြန်ရလိုက်ပါတယ် ။ ”
” အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ ချန်လှပ်ခဲ့တဲ့ အမွေအနှစ်က ဘာလဲ ? ချဲလ်ဆီး အတွက်လား ? မိုက်ပါတယ် ။ ဒီ နိုင်ငံရဲ့ ဘောလုံး လောက အတွက်လား ? ကျွန်တော်ကတော့ သူဟာ အင်္ဂလိပ် ဘောလုံး လောကအတွက် စက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးလို့ပဲ မြင်ပါတယ် ။ ”
” ကံဆိုးစွာနဲ့ ဒီ နိုင်ငံမှာ အကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့ အထင်ရှားဆုံး ပြယုဂ် က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘောလုံး ကလပ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ် ။ ဒီတော့ ဒီလို ငွေကြေး ဓန အင်အား ကြီးကြီးမားမား ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ဒီလူတစုကို နိုင်ငံထဲ ဝင်လာခွင့်ပေး ၊ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးနဲ့ ဘောလုံး ကလပ်တွေကို လည်ပတ်ခွင့် ပေးမိကြပါတယ် ။ ”
” ဒီ ဖြစ်စဉ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်က ဘာလဲ ? ဘောလုံးလောကကို ဖျက်ဆီးတဲ့ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အမြတ်ထွက်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ ကစားသမားတွေနဲ့ အေးဂျင့်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်သူကမှ သူတို့ထက် ပိုပြီး ပိုက်ဆံ မရကြပါဘူး ။ ဘယ်သူကမှ ဘောလုံးကနေ သူတို့ထက် ပိုပြီး အကျိုးအမြတ် မရကြပါဘူး ။ ”
” ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ ပိုကောင်းတဲ့ ဘောလုံး ပြိုင်ဆိုင်မှု အချို့ကို မြင်တွေ့စေပေမယ့် ၊ ဒီလို ဓနရှင်တွေ မရောက်လာရင်လည်း ဒါက ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပါပဲ ။ ဒီတော့ လက်ရှိ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ၊ အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ ဟာ အင်္ဂလိပ် ဘောလုံး လောက အတွက် တကယ်တမ်း ဘာများ အကျိုးပြုပေးတယ်လို့ ခင်ဗျား ထောက်ပြမှာလဲ ? ”
” ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ တကယ့် အနှစ်အရသာ အစစ်အမှန် ဟာ ပရိသတ်တွေနဲ့ ပိုပိုပြီး ဝေးကွာစေသလို ၊ ပွဲတပွဲ အတွက် ကုန်ကျတဲ့ စရိတ် က ပိုပိုများလာရုံသာ ရှိပါတယ် ။ ကစားသမားတွေ အတွက်ကျ ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းလာစေပြီး ၊ တန်ဖိုးလည်း ပိုကျသွားစေပါတယ် ။ ဒီတော့ အရှုပ်အထုပ် တခု ရှင်းသွားတာပေါ့ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
Previous Article ယူကရိန်းပြန် ဂျာနယ်လစ်တွေကို သွယ်ဝိုက်ပြီး ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီ နဲ့ မာရာဒိုနာ
Next Article လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် တခုမှာ အေဘရာမိုဗစ်ခ်ျ တယောက် ကိုယ်တိုင် ပင်နယ်တီ ဝင်ကန်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း အမှတ်တရ ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့ ဆီဘတ်စတီယန် နိုင်ဆဲလ်